हेर्नुहोस ! कुन कुन पक्षमा नेपाल भारत भन्दा अघि छ ? - Enepalese.com
हेर्नुहोस ! कुन कुन पक्षमा नेपाल भारत भन्दा अघि छ ?
इनेप्लिज २०७७ कार्तिक २३ गते १३:४८ मा प्रकाशित
भारत वा गणतन्त्र भारत पौराणिक जम्बुद्वीप, दक्षिण एसियामा अवस्थित एउटा देश हो । भौगोलिक दृष्टिले विश्वको सातौँ ठूलो र जनसँख्याको दृष्टिले दोस्रो ठूलो देश भारतको जनसङ्ख्या १२० करोड भन्दा बढि छ जुन चीन पछिको विश्वको दोस्रो सबैभन्दा धेरै हो ।
भारत नेपाल भन्दा जनसंख्यामा ४५ गुणा र क्षेत्रफलमा २२ गुणा ठुलो छ । कुल, गाह्र्रस्थ्य उत्पादनको हिसाबले भारतको अर्थतन्त्र विश्वमा पाचौँ ठुलो मानिन्छ । तर नेपालको अर्थतन्त्र विश्व बैंकका अनुसार अन्ठानव्यौँ स्थानमा पर्छ ।
यति हुदाँ हुदैँ पनि नेपाल भारत भन्दा कैयौ कुरामा अगाडि छ । ति मध्ये केहि विषयबस्तुमाथि आज हामी र्चा गर्दै छौँ । हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला ।